KU SAABSAN US CMOAPI
Waxaan nahay warshad dawooyin isku dhafan R&D iyo wax soo saar.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. waxaa la aasaasay 2007, waa shirkad shirkadeed tikniyoolajiyad farsamo oo ku lug leh cilmi baarista, horumarka iyo suuqgeynta agabyada ceyriinka ee dawooyinka.The alaabta mianly: Lorcaserin, dhex-dhexaadka Lorcaserin, orlistat ， Sesamol, tadalafil iyo dhex-dhexaadka kor u koritaanka, iwm.
Warshaddeenu waxay leedahay qalab lagu ogaanayo oo dhammaystiran, 60 nooc oo ah HPLC, 20 nooc oo ah chromatographs gaas ah, LCMS, ELSD, ultraviolet iyo qalabka muuqda ee muuqda, qaboojiyayaasha qalajisa iyo aaladaha kale ee horumarsan. Waxay ka gudubtay ISO14001, ISO9001 iyo shahaadada DMF iyada oo loo sii marayo mideynta iyo helitaanka, waxayna leedahay nidaam maarayn tayo guud ah.
U fiirso ilaalinta hantida aqooneed